जर्मन सहयोगमा नुवाकोटमा पहिलो प्रिफ्याब अस्पताल - Health Today Nepal
जर्मन सहयोगमा नुवाकोटमा पहिलो प्रिफ्याब अस्पताल
June 21st, 2016 अन्तर्वार्ता0comments
जर्मन सरकारको सहयोगमा नुवाकोटमा पहिलो प्रिफ्याव अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत वर्षको भूकम्पले त्रिशुलीमा रहेको नुवाकोट जिल्ला अस्पताल भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी टेन्ट मुनी राखेर विरामीको उपचार भइरहेको थियो ।
जर्मन संघिय आर्थिक सहयोग तथा विकाश मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिआईजेडले नेपालमै पहिलो पटक नुवकोटमा प्रिफ्याव भवन बनाइदिएको हो । एक करोड २० लाखको लागतमा निर्माण भएको अस्पताल भवनको एक कार्यक्रमबिच स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. पदमबहादुर चन्द र नेपालका लागि जर्मनका राजदूत माथियस मेयेरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
१७ कोठे उक्त भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. चन्दले दैविक विपत्तीका बेला जर्मन सरकारले मानविय सहयोगको हात अगाडि बढाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै नयाँ अस्पताल भवनले गुणस्तरीय उपचारमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । चन्दले भने, ‘नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण भूकम्पले ढलेका अस्पताल अझै निर्माण हुन नसकिरहेको बेला जर्मन सरकारले पहिलो प्रिफ्याब भवन बनाइदिएर ठूलो गुन लगाएको छ ।’ नेपालका लागि जर्मनीका राजदुत मेयेरले पाँच महिनाको छोटो समयमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै धादिङ, रसुवा र नुवकोटमा गरि ३८ वटा प्रिफ्याव स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नुवकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेल, जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सूर्यप्रसाद भुसाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नयाँ भवनले नुवकोटका मात्र नभएर रसुवा र धादिडका विरामीले पनि सहज उपचार पाउने बताए । यो अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरण आन्ड्रा नेपालले उपकरण उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ ।
Previous article अस्पतालमै डाक्टरलाई हत्कडी लगाउनु गलत
Next article ब्रस गर्दैमा मुख स्वस्थ हुन्न